भिम रावलको आक्रोश, ‘नयाँ नक्सा बनाउन कसले रोक्यो ?’ – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
९ आश्विन २०७७, शुक्रबार ०९:२३ English
काठमाडौँ, २७ मंसिर । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेता भीम रावलले नेपाली भूमी समेटेर नयाँ नक्सा नबनाएकोमा आपत्ति जनाएका छन् । उनले नयाँ नक्सा बनाउन सरकारलाई कसले रोक्यो भन्दै प्रश्न समेत गरेका छन् । संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा नेता रावलले प्रतीक चिन्हमा समेत भूमी नसमेटिएको भन्दै प्रतीक चिन्ह बनाउनेलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।
‘प्रतीक चिन्हमा हाम्रो भूभाग किन नराखेको ? प्रतीक चिन्हका निर्माता को हुन् ? कारवाही गर्नु पर्छ ।’ उनले भने । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र भूमिव्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्याल समेत सहभागी बैठकमा नेता रावलले आक्रोशित हुँदै सोधे, ‘भारतले आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गर्दा हामीले चाहिँ किन नगरेको ?, आफ्नो भ्रमी समेटेर नयाँ नक्सा बनाउन सरकारलाई कसले रोक्यो ?’
२७ मंसिर २०७६, शुक्रबार १४:१३ मा प्रकाशित